Iingxaki zeMicrostation 8.5 kwiWindows 7 -Geofumadas
Matshi, 2014 Microstation-Bentley
Abo banethemba lokusebenzisa iMicrostation 8.5 kule mihla kufuneka babhenele kwiWindows XP koomatshini ababonakalayo ngenxa yokungahambelani neWindows 7, kubi kakhulu kumaqhosha angama-64. Bayayikhankanya ingxaki kunye nomhleli wombhalo, endisele ndithethile ngayo ngaphambi kokuba ndiyisombulule kwaye bakwabhekisa kumphathi wemifanekiso kunye nonxibelelwano lwe-ODBC. Makhe sibone ukuba le micimbi isonjululwa njani.
Ingxaki ngeMphathi weRaster.
Asingombandela wengxoxo ukuba kutheni abantu beqhubeka nokusebenzisa le nguqulo kwiminyaka eli-10 kamva. Inyani yile yokuba iMicrostation V8 ukusukela ngo-2004 yayizinto zonke ezintsha. Abantu bayithandile le nguqulo ukuba ibe nakho emva kokubandezeleka ngaphezulu kweminyaka kunye ne-dgn eyayise-16-bit. Ngoku ndingafunda kwaye ndihlele ifayile ye-AutoCAD 2006 dwg / dxf ngokwendalo, ngokudibanisa ukugcinwa kwembali, ndishiya ecaleni ulwimi olubuhlungu lwe-MDL, ndamkela iVisual Basic yeZicelo (i-VBA) kwaye ngokuqinisekileyo ndisebenzise amandla e-dgn v8 esele Kwakungaphelelanga kumanqanaba angama-64 okanye ubuninzi bezinto.
Ngaphandle koku kuchazwe ngentla apha, ukuphuculwa kwesixhobo bekuseClipper, kunonxibelelwano olunobunqamle ekusingatheni izinto ezibonakalayo kunye nokunxibelelana kwesikhombisi, lenze uhlobo lokuhlaziya ngendlela yomfanekiso obuyisele into ngethoni emnyama. Kodwa ngaphandle kwezi zinto, inendawo yayo engalinganiyo kwimemori ye-RAM yekhompyuter, ngendlela enomdla, inokujongana nezixa ezikhulu zedatha ngokufanelekileyo.
UBentley wathembisa ukukhupha uhlobo "lokwenyani lweewindows", ethembisa ngokungazonakalisi izinto ezinokubakho. Ke, ngo-2006 kwavela uthotho lweXM, nangona abantu bemangalisiwe ukuba kutheni le nto yapapashwa ngomyalezo "wokungabi ngowokugqibela, kwaye silindele enye into." Kude kwaba yiminyaka embalwa emva kokuba i-V8i ivele, eyazisa yonke into ngoku eyiBentley exhaphaza phantsi komxholo we-i-model.
Ewe olo hlobo alusasebenzi ngenxa yento enokwenziwa ngoku ngeMephu yeBentley okanye nayiphi na inguqulelo yeMicrostation V8i. Kodwa ukuba umntu wakhelwe kwi-VBA yale nguqulo, ayinakuguqulwa ngokulula ukuba inkqubo ihlangabezana neemfuno zakho ezisisiseko; Ngaphantsi kakhulu ukuba uphuhliso belimi nkqo kwimeko yeMicrostation Geographics, iProjekhise, iGeebeb Publisher, okanye ukuba ixhaphaze ukusebenza kwe-dgn yaloo mhla njengembali.
Blah, blah, blah… ibali. Masibone indlela yokusombulula ingxaki:
Ukubuyela kumcimbi wengxaki yoMphathi weRaster. Yonke into ikutshintsho kulawulo lwe-cache lweMicrostation, oluchazwe ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanya i-MS_RASTER_CFILE_FOLDER.
Kwi-XM Bentley idibanisa ukuphathwa okwahlukileyo, kwaye ngokuqinisekileyo utshintsho lweendawo zeefolda eziza emva kweWindows XP lwenza ukuba kungabikho ukufikelela kwi-cache ... ngakumbi nangama-bits angama-64 apho amalungelo anzima ngakumbi kwiifolda ezithile. Kodwa ukusebenza kuyenzeka kuba akwenzeki ngeefayile zokuqala ezinjenge-jpg, kwenzeka kuphela ngeefayile ezixineneyo, njenge .ecw .hmr okanye .tiff.
Indlela elula yokulungisa umba kukukhuphela ifayile hrfecwfile.dll, yintoni eyayisombulula le mvavanyo yokuqala esayenza nge-Microstation XM.
Ngoko, oko kuyimfuneko ukukhangela i-Microstation XM kwi-intanethi, ukuyifaka, kwaye uphendule le fayile. Emva koko kufakwe endaweni kwindawo apho iifayile eziqhelekileyo zilandelayo:
C: \_ Inkqubo yeefayile (x86) \_ Iifayile eziqhelekileyo \_ Bentley Kwabiwe \_ RasterFileFormats \_ ECW \_ hrfecwfile.dll
Ngale nto, banokuthiwa bancamathisela, kodwa ukurhuqa kunye nokuwisa kuxhoma. Ukusombulula oku, kuya kufuneka ukhubaze imixholo ebonakalayo kulwakhiwo lwe desktop.
Ingxaki kunye nomqhubi we-ODBC we-Microsoft Acess kwi-bits 64
Kwimeko yabasebenzisi be-Microstation Geographics, kwakunamandla kakhulu ukuxhuma kwi-database ngokusebenzisa i-Oracle Driver, I-Microsoft Acess nge-ODBC. Nangona iJografi iphelelwe lixesha ngokubhekisele kwiMephu yeBentley, isasetyenziswa ziiprojekthi ezininzi, kangangokuba ayimangalisi into yokubona inkqubela phambili ephefumlelweyo isebenzisa ezi mpawu.
Ingxaki kulabo abangaqhelekanga ukufunda, kukuba kwi-Windows 7 kwi-bits 64 ayikwazi ukwenza uxhulumaniso lwe-ODBC ye-Acess okanye i-Excel.
Ukuba sifinyelela uxhulumaniso lwe-ODBC ngendlela yendabuko:
Ikhasi / ipaneli yokulawula / izixhobo zokulawula / Iinkqubo kunye nezokhuseleko / izixhobo zolawulo / imithombo yedatha ye-ODBC
Uyabona ukuba kuphela ngabaqhubi be-SQL Server abanokongezwa. Kodwa oku kungenxa yokuba enye indlela yokuqala kukusebenzisa oku ukusuka kwiibhithi ezingama-32, ke iimvume zomlawuli azivunyelwanga kwifayile yeOdbcad32.exe kwidilesi
Kwiingcamango, ungasebenzisa iipropati kwiqhosha lasekunene kwaye uguqula amalungelo okuqhuba njengomlawuli, kodwa kwezinye iimeko awukwazi ukuyivumela, ukuze,
Oko sikwenzayo kubheka umyalelo ofanayo kodwa phantsi kwe-64 bits imo, kwindlela:
Apha sijonga umyalelo Odbcad32.exe. Kwaye, xa sisenza umthetho sibona zonke iinketho esizilindeleyo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-OpenGeo Suite: Umzekelo omhle we-GIS Software eyenzelwe ubuthathaka bohlobo lwe-OSGeo
Post Next Iingcebiso 5 malunga nokhuseleko yeqela surveyOkulandelayo »
Iimpendulo ezili-15 kwi "Microstation 8.5 Iingxaki kwiWindows 7"
-Usebenzisa iMicstation (kungekhona indawo yokuhlala)
- Ifayile ye .ucf ayilungiswanga kakuhle
-Ijogragi ifakwe ngokuchanekileyo. Kuya kufuneka uyifake kwakhona.
Enrique Galicia uthi:
Ndineengxaki engaqhelekanga, ukuba xa kuqhuba inkqubo ye-geographical project projekthi ayibonakali kwimenyu ephezulu, ukuze ukwazi ukulayisha idilesi, kodwa ayikho into engayifuniyo. Ndifuna isiluleko esisekelwe kule ngxaki
Ewe ewe ingxaki ethile, ngokuqinisekileyo yokufakela iifestile.
Marvin Morazan uthi:
Ndiye ndahlola ukuba ndiyifake kwaye ndibuye emva kokuqala kwaye akukho nto
Kubonakala ngathi lo matshini unento engaqhelekanga ngokukodwa. Ngokungathi isicelo se-odbc sonakalisiwe okanye asihambelani.
Mhlawumbi kuya kuba kuhle ukukhipha nokubuyisela iMicstation and Geographics, abaqhubi bexhumo abanakho ukufakwa ngokupheleleyo.
kwaye kuzo zonke izibonakaliso zedilesi ebendinikeze i-se kwaye sele ndiyifakile kwezinye iikhompyuter ukuba ithi hayi ezininzi, kodwa kule enye indinika lo myalezo: Isiteyitimenti se-CONNECT esingafezekanga kwaye sandiphosa: Umdibaniso womsebenzisi omtsha uhlulekile
Hlola eli nqaku
Kubonakala kum ukuba into enokutshintsha yile fayile msgeo.ucf, ebonisa ukuxhamla kwedatha kwiprojekthi.
Ukuba into oyifunayo yiprojekthi yendawo, kufuneka ibe yinto efana nayo
MS_GEOPROJNAME = indawo yendawo
MS_GEOINITCMD = IPHULO LOKUVULA
MS_GEODBLOGIN = indawo yasekhaya
Andiyazi into endiyenzayo,
Andiyiqondi ndixelele emfutshane okanye emfutshane nceda nceda
umyalezo uphonswa xa ndivula kwaye ndizama ukwenza idijithali kwiprojekthi yendawo kwaye iphosa umyalezo ofanayo kwakhona
Emva koko kufuneka uye kwifayili ye-ucf uze ususe idibaniso yokuxhumeka kweprojekthi onayo.
Kukwindawo yokusebenzela / abasebenzisi
umyalezo uthunyelwa emva kokuba ndivula ii-geographics, kwaye ndifuna ukwenza idijithi yeprojekthi yendawo kwaye ndithumelele umyalezo ofanayo kwakhona
Uthumela nini umyalezo?
Ngaba usebenzisa iMicstation okanye Geographics?
Ingxaki yam kukuba undiphonsa msg othi: I-statement CONNECT engaphumelelanga
Wow loo nto, nangona andinakubonisa ubungqina kuba umatshini wam nge windows7 umemeza njengoSpain ngeCawa.
kodwa ndiza kuyizama komnye umatshini, ngoku kuya kufuneka kwenziwe windows8 njani malunga ...